सन्दीप आईपीएलमा अनुबन्ध भएपछि परिवारमा छाएको खुसी ! (भिडियो सहित) – Nepali Audio Video
सन्दीप आईपीएलमा अनुबन्ध भएपछि परिवारमा छाएको खुसी ! (भिडियो सहित)
पहिलो पटक नेपाली खेलाडी इन्डियन प्रिमियर लिग ( आईपिएल ) मा अनुबन्ध भएपछि मुलुकभरी नै खुसीयाली छाएको छ । नेपाली उदयमान क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने पहिलो पटक ( आईपिएल ) मा अनुबन्ध भएपछि अहिले उनको चर्चा देशभित्र मात्रै नभई विश्वभरी नै भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली खेलाडी इन्डियन प्रिमियर लिग ( आईपिएल ) मा खेल्न पाएका थिएनन् ।
सन्दिपले पढाईलाई भन्दा बढी लगाव क्रिकेटमा दिन्थे । त्यसो भएपनि आफुले कहिलेही पढाईका लागि दबाब नदिएको उनका बुबाले बताए । सुरुमा अण्डर नाईन्टिनमा सहभागीता जनाएका सन्दीपले चामत्कारीक प्रर्दशन गर्दै गए । उनले सन् २०१६ मा राष्ट्रिय टोलीमा सहभागीता जनाउने मौका पाए । नेपालमा भएको केन्या विरुद्धको खेल हेर्दा उनका वुवालाई छोराले क्रिकेटमा ठुलै छलाङ मार्छ भन्ने महसुस भएको बताए । उनकै प्रर्दशनकै कारण आईपिएलमा दिल्ली डेयर डेविल्सले वोलकवोलमा भारु २० लाखमा खरिद गर्यो । सन्दिप अहिले अभ्यास खेलका क्रममा युएईमा छन् । सन्दिपले क्रिकेटमा पाएको सफलताले उनकी आमा कोपिलादेवी लामिछानेको खुसीको सीमै छैन् ।